Yeka indlela okunengeka, lena inhlanzi yakho e aspic: perch jellied
Akusiyo imfihlo ukuthi perch jellied kubhekwe isikhali imfihlo ekhaya Soviet: izinhlanzi kwaba atholakalayo, ngisho eziphoqelelwe ukuba adle, kepha ukuthi angalenza kanjani ukuze ukusetshenziswa zonke izingxenye kusuka ekhanda kuya umsila, futhi ngesikhathi esifanayo ukondla lonke emndenini obumbene futhi omakhelwane?
Akwaziwa ngokuthé ngqo ukuthi inhlanzi beveza aspic - mhlawumbe kwakuyiphutha noma isilingo elilodwa umpheki eyathola ukuthi izinhlanzi jelly akuzona njengoba ezinjengendle futhi engenamsebenzi njengoba babecabanga.
Recipe jellied Pike perch
Izithako:. Empeleni, perch - 0.6kg, onion - 1 ucezu, izaqathe - 1 pc,. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, izinongo (umfire, allspice 5 uphizi, usawoti), iqanda omhlophe, ingilazi dry iwayini emhlophe, gelatin granules.
Ingasetshenziselwa njengendlela umhlobiso: lemon, amaqanda izigwaca kanzima abilisiwe imifino, uphizi, cranberry noma cranberry, obomvu caviar.
Ukuze silungiselele jellied Pike perch, izinhlanzi kufanele kuqala igqamuka futhi bahlanza - uma ungakaqedi isidumbu aphume esitolo. Susa kwangaphakathi nokuhlanza off esikalini nge amaphiko, ukusika izinhlanzi kanye ugema, susa amathambo, ikhanda nomsila (Ungadlali). umucu Solim kanye ukugoqa in ucwecwe lokukhuhla phansi.
kuhhavini Preheat emakhulwini degrees wafaka Bhaka perch wakhe cishe 1 ihora - izinhlanzi uthole namanzi futhi engenawo amafutha. Ngemuva ithathwe okuphuma kuhhavini, uhlangane ayo, ukupakisha umucu e epulasitikini bese efakwa imbala ukuze kuphole ngobusuku obubodwa.
Gcwalisa ingxenye esele okuvela kuyo le perch - bone head amanzi eyisicaba umunwe ngenhla - kubalulekile ukuba Bilisa umhluzi. Engeza ebhodweni zamakha, imifino - izaqathe zangaphambi shredded kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ehlutshiwe aqotshwe anyanisi. Usawoti ukunambitha kanye thumba phezu emlilweni ophansi imizuzu engu-15 ngaphandle lid Khona owetha iwayini, imenze ngamathumba bese ushiye thumba enye imizuzu engu-15. Khona-ke futhi ususe ebusuku, ukuze izinhlayiya esezinzile umhluzi uketshezi elicwengekileyo.
Manje thina ukuyikhipha izinhlanzi kanye ukwandisa. Ukuze silungiselele jellied Pike perch fillet ku 300-400g idinga ilitha umhluzi ecebile kakhulu. Thina ukuhlunga ngokusebenzisa cheesecloth. Funda imiyalelo ku gelatin - ke kufanele kube ngokwanele ukuba suffice lonke umhluzi. Cwilisa gelatin in izingxenye ezincane, lonke umhluzi kulungele on ukushisa low.
Ukungeza esincane gelatin ebhodweni yethu. Iqhinga kancane: ukuze perch jellied ukuthola ecacile futhi elikhanyayo, kungenziwa ngesiswebhu ibe Foam amaqanda qanda, enezele isobho kulesigaba Lesiphakeme. Uma amaprotheni liphume, cisha umhluzi.
Kungase kudingeke ukuba waphinda Bilisa umhluzi ukufeza ukufana. It ekugcineni elicwengekileyo ngokusebenzisa cheesecloth futhi unike kuphole ekamelweni lokushisa.
Ready ukukhonza i aspic
Ungakwazi pick up encane a la Carte isikhunta, futhi kungenzeka, in the isiko emizi Soviet ukhethe oblong isidlo jellied. Thela ungqimba elincane isitsha phansi kule esiqandisini futhi ususe. Lapho ungqimba Uqinisa, kwasakazeka Imi (noma lonke) isidumbu iphezulu. Top isipikili up umhluzi - ungqimba kunalokho mncane, bese usetha ukwakha ijeli efrijini.
Ngakho walungisa kwasolwandle aspic ungakwazi ukuhlobisa noma yini, ngoba ijeli esobala kufanelekile yimuphi itafula. Siphakamisa ukusetshenziswa encane uphizi, amajikijolo, amaqanda, aba nguhhafu izigwaca amaqanda futhi iminqumo, amahlumela ngesikele sokuthena of parsley, basil kanye cilantro.
Ingulube nge amakhowe
Zucchini Amnandi Futhi okunempilo e multivarka. ukupheka zokupheka
I-Nobel Peace Laureates: Uhlu. Ubani owawuthola umklomelo weNobel Peace?
Bubble Ikholomu: zinhlobo, ngebuhle nebubi
Paint ukunikela eyelashes
"Amprolium" ngoba broilers. Izici isicelo